राज्यले दिने ३ लाख पाउँने कुरा नितालाई, कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मत !
घर नै छैन कता मर्मत गर्ने हो ?
श्रावण ३०, २०७५ | दोलखा
दोलखा बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ नाम्दु खनियाँचौरकी निता घिमिरेको २०७२ सालमा बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले घर मात्रै भत्काएन श्रीमान समेत गुमाउनु परेको थियो । न्यून आर्थिक अवस्था भएको निताको परिवारले दुख-सुख गरेर एउटा घर वनाएका थिए । बैशाख १२मा बस्ने बास पनि गुमाउनु परेको थियो भने भूकम्पकै कारण चिसो र पोषणको अभावले करिब १ वर्षपछिसँगै हातमुख जोड्नका लागि काम गर्ने ४५ वर्षीय श्रीमानको पनि मृत्यु भयो ।
नीता भन्छिन, घर नै छैन कता मर्मत गर्ने हो, सरकारले त मर्मतमा पो नाम पठाएछ ।
भूकम्प गएलगतै नेपाल सकारले तथ्याङक संकलन गर्न प्राविधिक खटायो । पीडित घिमिरेले पनि आफ्नो नाम त लेखाउनु भयो तर अहिलेसम्म निजी आवास बनाउन राज्यले दिने ३ लाख पाउने कुरा कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मत ! भएको छ । दोलखामा ५० हजार निजी आवास वनिसक्दा पनि जीवनमा साथ दिने श्रीमान र दु.ख गरेर वनाएको घर गुमाएकी घिमिरेको नाम पुननिर्माणमा अहिलेसम्म अटाएन । पटकपटक गुनासो सम्बोधनका लागि अरुको नाम आउँदा निताको नाम कहिल्यै आएन ।
राज्यले तेस्रोपटक सम्बोधन गरेको गुनासोमा पुननिर्माणका लागि नाम आउनको सट्टा घर नै नभएकी घिमिरेको प्रवलीकरणमा नाम आएको सुनेर छक्क परेको छ । नीता भन्छिन, घर नै छैन कता मर्मत गर्ने हो, सरकारले त मर्मतमा पो नाम पठाएछ । गुनासो लेखाएर पठाएपछि यो पटक त पक्कै लाभग्राहीको सुचिमा नाम अटाउने आशामा वसेकी घिमिरेले नयाँ घर बनाउनकै लागि गिटी समेत जम्मा गरेको थियो । गिटीमा घाँस उम्रियो तर तीन वर्षसम्म पनि पूर्ण लाभग्राहीमा नाम आएन ।
अहिलेसम्म अस्थायी आवास बनाउन नसकेर अर्काको घरमा वस्दै आएकी निताको घर मर्मतका लागि गुनासोमा नाम आएपछि अन्यौलमा पर्नुभएको छ । आप्नो पुरानो भत्किसकेको घरको कहाँ कसरी मर्मत गर्ने हो ? थाहा छैन् । वल्लो घर पल्लोघर, तल्लो घर वरिपरि सबै नयाँ वने तर सरकारले अनुदान देला र घर बनाउँला भन्ने आशामा रहेकी पीडित घिमिरेको नभएको घर मर्मतमा पो नाम आयो ।
१० वर्षदेखि १५ वर्षसम्ममा ४ छोराछोरी छन् । लालन पालन र पठनपाठनको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर एक छोरी अरुको घरमा काम गर्न राख्नुपर्ने वाध्यता सुनाइन् ।
अहिले त घर बनाउने आशा पनि सकियो अब के गर्ने ? स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा आयो भन्छन् तर हाम्रा लागि कसैले केही गरेनन,निताको दुखेसो छ । घिमिरेको परिवारले घर मर्मतका लागि नेपाल सरकारबाट १ लाख पाउनेछ । तर कमाउने श्रीमान गुमाएकी घिमिरेलाई एक लाख रकमले भत्किएको घर पन्छाउनै पुग्दैन । कमाउने भए त घर बनाउन आँट गर्न सक्थे होला ? घिमिरेसँग अहिले नै घर बनाउन सक्ने आँट समेत छैन् । सासूससुरा छुट्टै बसेका छन्, सबैको घर वनिसक्यो । तर ५ जनाको निताको परिवार छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर वसेका छन् । बैशाखको अन्तिमसम्ममा आफ्नै भग्नावशेष घरमा राहतमा पाएको पालबाट घामपानी छेल्दै वसेका परिवार वस्न नहुने भएपछि छिमेकमा वस्दै आएका हुन् ।
यता वैत्यश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आर्चायले भने घिमिरे परिवारको समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल गाउँपालिकाले पहल गर्नें प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।